Booliska Garowe oo Shir la Yeeshay Qaybaha Bulshada Gobolka Nugaal – Radio Daljir
Maajo 7, 2015 1:20 b 0
Khamiis May 07, 2015 (Daljir) — Kulan looga hadlayey adkaynta amaanka iyo wada shaqaynta Booliska iyo Bulshada ayaa lagu qabtay magaalada Garoowe ee Caasimada Dowlada Puntland Gaar ahaan Xaafada Hodan ee Magaalada Garoowe.
Kulanka oo uu soo qaban-qaabiyey Gudiga Xaafada Hodan ee Magaalada Garoowe ayaa waxaa ka soo qayb-galay Gudoomiyaha Gobalka Nugaal Cabdulaahi Ciise Aw-Axmed,Maamulka Degmada Garoowe,Taliska Qaybta Booliska ee Gobalka Nugaal iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan Xaafada Hodan ee Garoowe.
Gudoomiyaha Xaafada Hodan ee Jawaahir oo kulanka ka hadashay ayaa cabasho ka muujisay ciidamada Booliska ee loogu talo galay in ay ka shaqeeyaan ilaalinta Xaafada waxaana ay sheegtay in ay ka gaabiyeen howshii loo igmaday.
Jawaahir ayaa intaa ku dartay in xaafada ay ka jiraan dhalinyaro xiliga habaynkii ah furata moolida iyo agabka kale ee shacabku ay wataan waxaana ay ka codsaday Maamulka Degmada Garoowe in arinkaasi wax laga qabto.
Xoghayaha dowlada Hoose ee Degmada Garoowe Qaasim Maxamed Cabdi oo kulanka ka hadlay ayaa bulshada xaafada ku dhaliilay xirnaan shaha wadooyinka xaafada waxaana uu ku booriyey in ay furaan wadooyinka si xili roobaabka ay biyuhu uga gudbaan waxaana uu intaa ku daray in dhawaan Degmada Garoowe laga hirgalin doono nalalka qoraxda ku shaqeeya.
Ugu danbayntiina Gudoomiyaha Gobalka Nugaal Cabdulaahi Ciise Aw-Axmed oo kulanka soo xiray ayaa ku booriyey Bulshada ku dhaqan Magaalada Garoowe in ay ka qayb-qaataan Sugitaanka Nabadgalyada isagoona ka codsaday in laaamaha amaanka la soo socod siiyaan cidwalba oo ay u arkaan in amniga qalqal galinayso.